Manao Diaben’ny Fitovian-jo sy ny Rariny Ny Vehivavy Ao Indonezia · Global Voices teny Malagasy
Zon'olombelona ny zon'ny vehivavy
Voadika ny 09 Marsa 2018 8:04 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, bahasa Indonesia, русский, 日本語, English
Mpandray anjara tamin'ny Diabe ho an'ny Vehivavy 2018 tany Jakarta. Sary avy amin'ny Women's March (Diaben'ny Vehivavy), nahazoana alalana.
Olona an'arivony no nanatevin-daharana ny Diabe ho an'ny Vehivavy tao amin'ny tanàna indoneziana maherin'ny am-polony mba hitaky ny rariny sy ny fiarovana ny zon'ny vehivavy. Natao tamin'ny 3 martsa 2018, andro vitsivitsy talohan'ny Andro Iraisam-pirenena ho n'ny Vehivavy, 8 Martsa ireo diabe ireo.
Manana fitakiana valo amin'ny governemantam-panjakana ny Diaben'ny Vehivavy:
1.Fanafoanana ny lalàna sy politika manavakavaka izay mampaharitra ny herisetra amin'ny vehivavy
2.Fandaniana lalàna sy politika miaro ny vehivavy, ankizy, vahoaka tompotany, olona manana fahasembanana ary vondrona vitsy an'isa (vehivavy) manoloana ny fanavakavahana sy herisetra ara-nofo
3.Fitsarana sy fanarenana azo hidirana mora foana ho an'ireo vehivavy niharan'ny herisetra
4.Fampitsaharana ny fitabahan'ny fanjakana sy ny fiarahamonina amin'ny vatana sy ny ara-nofo
5.Fanafoanana ny fanilikilihana sy ny fanavakavahana ny maha lahy sy vavy, ny firaisana ara-nofo sy ny fahasalamana
6.Fanafoanana ny fampiharana herisetra any amin'ny fitsarana, sekoly sy toeram-piasana
7.Famaranana ny fahasimbana ara-toekarena sy ara-bola amin'ny vehivavy indrindra indrindra ireo miasa eny amin'ny orinasa, ny sarimbavy, ny mpivaro-tena sy ny mpiasa an-trano.
8.Fiarahamonina mavitrika kokoa amin'ny fanafoanana ireo fanao tsy ara-drariny sy ny kolontsain'ny herisetra misy eo amin'ny sehatra samihafa
Anisan'ireo olana nampahafantarina tamin'ny diabe ny fanitsiana nankatoavina tamin'ny fehezan-dalàna famaizana Indoneziana (RKHUP) izay manameloka ny tsikera atao amin'ireo mpikambana ao amin'ny Antenimiera (DPR). Nanameloka ny fandaniana fehezan-dalàna izay mandràra ny fanitsakitsaham-bady sy ny fizarana vaovao momba ny fanabeazana aizana sy ny fanabeazana ara-pananahana ihany koa ireo mpandray anjara.
Manana mponina miozolomana maro an'isa i Indonezia ary mirehareha amin'ny fampiroboroboana ny fomba fijery mahalala onony momba ny Silamo izay mankalaza ny fahasamihafan'ny finoana mba hananganana fiarahamonina mirindra. Na dia izany aza, nandritra ny taona vitsy lasa, nanosika amin'ny fandraisana hentitra momba ny fampianarana Silamo sy ny fampiharana azy ireo amin'ny lafiny maro amin'ny fitantanana ireo mpitondra fivavahana hiringiriny.
Nokarakaraina voalohany tamin'ny taona 2017 ny Diaben'ny Vehivavy ao Indonezia, noforonina mba hanetsiketsika ny olona avy amin'ny lafi-piainana rehetra mba hiady amin'ny herin'ny fanjakazakan-dehilahy eo amin'ny lafi-piarahamonina rehetra. Nanambara ny faharetan'ny foto-kevitra feodaly ireo mpandray anjara, tahaka ny fisainana Javaney taloha izay ny vehivavy no hany tsara ho an'ny “macak, masak, manak” (manao izay mampanintona ny vadiny, mahandro sakafo ho an'ny fianakaviany, mitondra zaza).
Niantso ho amin'ny firaisankina sy ny fanohanan'ny vahoaka ny zon'ny vehivavy ireo mpanao diabe ary nampiasa ny tenirohy #LawanBersama (#Miara-mitolona) tao amin'ny media sosialy:
Tombontsoa & fanetre-tena ny manao diabe miaraka amin'ireo vehivavy manome aingam-panahy sy mahafinaritra tamin'ity maraina ity nandritra ny diaben'ny vehivavy
(Raha) sahirana amin'ny (fifehezana) ny elakelape ny fanjakana, mihomehy ny mpanao kolikoly. #againstRKUHP #notoincoherentRKUHP
Hoy ny vakin'ny fanazavana: “Ato amin'ny Diaben'ny Vehivavy androany maraina. Ankoatra ny maneho ny hevitro, ny mahafinaritra tamin'izany dia ny fihaonana tamin'ireo olona zara raha hitantsika noho ny rotorotom-piainantsika. Tiavo ireo vahoaka ireo.”
Hoy ny vakin'ny sora-baventy: “Nofiratsin'ny lehilahy ihany koa ny fanjakazakan-dehilahy.”
Any Indonezia, mbola mahazatra ny fanambadian'ny tsy ampy taona na dia eo aza ny lalàna mandràra ny ray aman-dreny tsy hampanambady ny zanany latsaky ny 18 taona. Matetika zara raha taterina ny fanambadian'ny ankizy indoneziana. Tao Kupang, renivohi-paritanin'i Nusa Tenggara Atsinanana akaikin'i Bali, tanora roa no naneho ny ahiahiny sy ny fanantenany:
Hoy ny fanazavana amin'ny Instagram: “Ny Diaben'ny Vehivavy Kupang ho amin'ny maha-olombelona kokoa ao Indonesia.”
Hoy ny vakin'ny sora-baventy: “Mama, tsy vonona hiteraka ny kiboko” sy “Mama, mbola te hianatra aho.”
Ny Diaben'ny Vehivavy tamin'ny 3 Martsa dia voalohany fotsiny tamin'ireo hetsika maro natao nandritra ny volana tao Indonezia.
Filipina 22 Septambra 2021